Axmed Macalin Fiqi ayaa ka hadlay ganacsatada dhaqaalaha siisa Ururka al-Shabaab - Tilmaan Media
Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa ka hadlay ganacsatada dhaqaalaha siisa Ururka al-Shabaab ee ku sugan deegaannada ay maamusho Galmudug.
Fiqi ayaa sheegay in aysan jirin sabab keeni karta xilligaan in ganacsatada lacago qasab ah ay ka qaadaan al-Shabaab, maadaama aysan jirin waxyaabo ku qasbaya in ay bixiyaan lacagaha ay ka dalbadaan.
“Min Gaalkacyo illaa Dhuusamareeb, dhammaan degmooyinkaan waxaa gacanta ku haya Maamulka Galmudug, ma garan karo sabab keeni karta ama dan ku qasbeysa in si qasab ah ay lacago ku siiyaan al-Shabaab, maadaama aysan goobo ganacsi oo kale aysan ku lahayn deegaannada Shabaab ay ku sugan yihiin” ayuu yiri Wasiirka Amniga Galmudug.
Wasiirka sheegay in Baarlamaanka Dowlad Goboleedka Galmudug in dhawaan uu u gudbinayo sharciga ka dhan ah taageerada waxa loogu yeero Argagixisada iyo ciqaabta ka dhalan karta ciddii lagu caddeeyo in maaliyadda ay ka taageerto argagixisada.
Isagoo lahadlayey VOA-da ayuu tilmamaay in Wajiga koowaad ee sugidda amniga in ay ku guuleysteen, kaddib markii ay qaadeen jidgooyooyinkii ay dhigteen Maleeshiyaad hubeysan oo hadda la xareeyay.
al-Shabaab ayaa inta badan lacag ay ku sheegeen ZAKWAAT ka qaata ganacsatada ku sugan Koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan deegaannada ay uga suganyihiin.
Qaramada Midoobey oo ka digtay dhibaatada bani’aadanimo ee soo food saartay Soomaaliya